स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफ यसरी बढाउनुस् - Nepal News - Latest News from Nepal
अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्मार्टफोनमा जति सुविधा छ, ब्याट्री लाइफ टिकाइराख्न चुनौती छ। बोल्नमात्र मिल्ने मोबाइलबाट स्मार्टफोनसम्म आइपुग्दा कम्प्युटरभन्दा एडभान्स भइसकेका छन्।
स्मार्टफोनमा रहेका असंख्य फिचरले धेरै क्षमताका ब्याट्री पनि २४ घन्टाभन्दा बढी टिकाउन गाह्रो छ।
अहिले मोबाइल फोनबिनाको दैनिकी कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। प्रायः जोसुकैको मोबाइल फोन दिनभरजसो चलिरहने गर्छ। त्यसैले स्मार्ट फोनको ब्याट्री अत्यधिक खपत हुने गर्छ।
केही वर्षअघिसम्म फिचर्स फोन प्रयोग गर्ने चलन थियो। त्यो बेला मोबाइलको प्रयोग केवल कुरा·ानी र म्यासेज गर्नमात्र प्रयोग हुन्थ्यो। तर अहिलेको समय स्मार्ट फोनको हो।
एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्ट फोन धेरै मानिसको प्रिय बनेको छ। स्मार्ट फोनमा हुने ब्लुटुथ, जीपीएस, वाइफाई र थ्रीजीजस्ता सुविधाले ब्याट्रीको आयु घटाइरहेको हुन्छ। यी सबै सुविधा एकसाथ एक्टिभ गर्दा ब्याट्री लामो समय टिक्न सक्दैन।
स्मार्टफोनका फिचर्समध्ये हाम्रा लागि कतिपय उपयोगी हुँदैन। त्यसैले स्मार्ट फोनको ब्याट्री लामो समय टिकाउन त्यस्ता अनावाश्यक फिचर्सबाट जोगिनुपर्छ।
१. ब्राइटनेसले स्मार्ट फोनमा धेरै ब्याट्री खपत गर्छ। ब्याट्री लामो समय टिकाइराख्न स्मार्ट फोनको स्क्रिनलाई मधुरो बनाउनुपर्छ। सेटिङमा गएर स्क्रिन ब्राइटनेस कम गर्नुपर्छ। यसबाट ब्याट्री लाइफ बढाउन सकिन्छ।
२. फोन जति धेरै अन रहन्छ, ब्याट्री त्यति नै बढी खपत हुन्छ। एन्ड्रोइड फोनमा दुई मिनेटको स्क्रिन टाइम आउट सेट गरिएको भए १५ या ३० से·ेन्डमा सेट गर्नु राम्रो हुन्छ।
एन्ड्रोइड र आइफोनमा स्क्रिन टाइम आउटको सेटिङ करिब उस्तै हुन्छ। आइफोनमा स्क्रिन टाइम आउटलाई एक मिनेटमा सेट गरेर ब्याट्री बचाउन सकिन्छ।
३. सबैजसो स्मार्ट फोनमा वाइफाई हुन्छ। वाइफाईमा बसेपछि त्यसलाई अफ गर्न भुल्छौं। त्यसैले वाइफाईबाट बाहिरिएपछि वाइफाई अफ गर्न भुल्नुहुन्न। त्यसैगरी ब्लुटुथ अन राख्दा पनि चाँडो ब्याट्री खपत हुन्छ। ब्लुटुथ प्रयोग गरेपछि पनि अफ गर्नुपर्छ।
वाइफाई र ब्लुटुथ आवश्य·ताबिना अन राख्नु स्मार्ट फोनको ब्याट्री अफ गर्नुबराबर हो। अचेल हेन्ड्स फ्री हेडसेट, वायरलेस स्पिकर ब्लु टुथबाट चलाउने र ब्लुटुथबाटै रेडियो बजाउने चलन छ।
यदि तपाईं कारमा हुनुहुन्न या वायरलेस म्युजिक सुनिरहनुभएको छैन भने ब्लुटुथ बन्द राख्नुपर्छ। यसो गर्दा ब्याट्री लाइफ कम्तीमा एक घन्टा बढ्छ।
आईओएस सेभेन र एटमा पनि ब्लुटुथ र वाइफाई बन्द गर्न ·ठिन छैन। स्क्रिनको बटमलाई तलबाट माथि थिच्नुस् अनि ·न्ट्रोल सेन्टरको डिस्प्लेमा गएर बन्द गर्न सकिन्छ।
४) फोनको भाइब्रेटले पनि ब्याट्री चाँडो सक्छ। बैठक या अन्य विशेष काममा मात्र भाइब्रेट प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्याट्री ब्या·अप बचाउन फोनलाई भाइब्रेटको साटो रिङगटोनमै सेट गर्नु राम्रो हुन्छ।
५) ब्याट्री बचाइराख्न अनावश्यक नोटिफिकसन सधैं अफ राख्नुस्। अनावश्यक नोटिफिकेसन एक्टिभ भए ब्याट्री चाँडो खपत हुन्छ।
६) फोनमा खुलेका एप्लिकेसनलाई नछोड्नुहोस्। स्मार्ट फोनमा एकसाथ धेरै एप्लिकेसन चल्ने ‘मल्टिटास्किङ’ सुविधा हुन्छ।
एकसाथ धेरै एप्लि·सेन खुल्दा प्रोसेसरलाई भार पर्छ, जसले ब्याट्री ब्या·अप घटाउँछ। पृष्ठभूमिमा खुलेका एप्लिकेसन बन्द गरेमा सीपीयूको बोझ कम भई ब्याट्रीको खपत घटाउँछ।
यी एप्लिकेशन बन्द गर्न एन्ड्रोइड फोनको मल्टिटास्किङ बटनबाट तत्काल प्रयोग भएका तीनवटा एप्लि·सेन बन्द गर्दा ब्याट्री ब्याकअप बढ्छ।
आईओएसमा भने ती एप्लिकेसन बन्द गर्न होम बटनमा गएर डबल ट्याप गर्नुस्। त्यसपछि तलबाट माथि स्वाइप गरेर ती एप्लिकेसन बन्द गर्न सकिन्छ।
६) स्मार्ट फोनको स्क्रिनमा एनिमेटेड तस्बिर, भिडियो हेर्दा मजा आउँछ। तर याद राखौं, यसो गर्दा ब्याट्री एकदमै चाँडो खपत हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म फोनको स्क्रिनमा साधारण ब्या·ग्राउन्ड प्रयोग गर्नुपर्छ।
७) स्मार्टफोनमा जीपीएसले धेरै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। तर, जीपीएस हर समय अन गर्नु जरुरी हुँदैन। जीपीएस चलाउन वाईफाई, थ्रीजी वा फोरजी नेट चाहिन्छ। त्यसैले जुनसुकै बेला जीपीएस अन गर्नु पनि ब्याट्री ब्याकअप चाँडो सक्नु हो।
८) यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा फोनमा २० प्रतिशत ब्याट्री बाँकी छ भने चार्जमा लगाइहाल्नुपर्छ। ब्याकप जिरो बनाउनु ब्याट्रीको आयु घटाउनु हो। पूरा चार्ज भएपछि फोनलाई चार्जरबाट हटाउनुपर्छ।
९) अनावश्यक एप्लिकेसन पनि मोबाइलका शत्रु हुन्। त्यसैले आफूले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसन कुन-कुन हुन्? निश्चित गरी ती अनावश्यक एप्लिकेसनलाई बिदा गर्नुपर्छ।
कुन एप्लिकेसनले कति बिजुली खपत गरिरहेको छ? पत्ता लाउन सकिन्छ। अनावश्यक एप्लिकेसन हटाउँदा ब्याट्रीको आयु बढ्छ।
१०. स्मार्ट फोनको ब्याट्री चाँडो सक्ने अर्को कारण ईमेल नोटिफिकेसन हो। जरुरी छैन भने फोनमा लगातार ईमेल चेक गरिरहनु ब्याट्री बर्बादी गर्नु हो।
ब्याट्री जोगाउन फोनमा २० देखि ३० मिनेटमा ईमेल आएको नोटिफिकेसन राख्न सकिन्छ। यसो गर्दा ब्याट्रीको ब्याकअप बढ्छ।
Celebrities Who Went For Cosmetic Surgeries, Before And After Pictures.